नेपालमा अहिलेसम्म प्राप्त खोप झन्डै १ करोड डोज, लगाइयो ५९ लाख :: Setopati
नेपालमा अहिलेसम्म प्राप्त खोप झन्डै १ करोड डोज, लगाइयो ५९ लाख थप कति आउँदैछ खोप?
विवेक राई काठमाडौं, साउन १७
नेपालले अहिलेसम्म कोरोनाविरूद्धको झन्डै एक करोड डोज खोप प्राप्त गरेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार हालसम्म ९७ लाख ८२ हजार ८५० डोज खोप प्राप्त भएको छ।
प्राप्त भएको जम्मा खोपमध्ये सरकारले खरिद गरेको खोप ५० लाख डोज हो भने बाँकी विभिन्न देशले अनुदानमा दिएको हो। झन्डै एक करोड डोज खोप प्राप्त भएपनि आज (आइतबार) सम्म जम्मा ५८ लाख ७७ हजार ७५९ डोज खोप लगाइएको छ। अझै ३८ लाख डोज खोप लगाउन बाँकी छ।
यस्तै पहिलो डोज लगाउने ४० लाख ६४ हजार २८८ जना छन् भने १८ लाख १३ हजार ४७१ जनाले दोस्रो डोज लगाएका छन्। अमेरिकी सरकारले अनुदानमा दिएको जोनसन एन्ड जोनसनको खोप एक डोज मात्र लगाउनुपर्ने भएकोलाई उक्त खोप लगाउनेलाई पनि दोस्रो डोज लगाइएको संख्यामा समावेश गरिएको छ।
स्वास्थ्य सेवा विभाग अन्तर्गको खोप शाखाका वरिष्ठ फार्मेसी अधिकृत डा. बडेबाबु थापाले प्राप्त भएको सबै खोपहरू सम्बन्धित प्रदेशहरूमा पठाइसकिएको जानकारी दिए। अहिले केन्द्रको ‘कोल्ड चेन’मा भेरोसेल खोप मात्र झन्डै ५ लाख डोज रहेको र बाँकी खोपहरू भने सबै पठाइसकिएको उनले जानकारी दिए।
‘हामीले सबै खोप प्रदेशहरूमा वितरण गरिसकेका छौं। केही जिल्लाहरूमा खोप लगाउन सुरु भइसक्यो होला र केहीमा अझै बाँकी होला। प्रदेशहरूले कसरी खोप वितरण गर्छन् भन्ने सबै विवरण केन्द्रलाई थाहा हुँदैन,’ उनले भने।
डा. थापाले सात वटा प्रदेश रहेपनि खोप वितरण गर्दा ८ वटा प्रदेशको हिसाब गरिने बताए। उनले बागमतीको हकमा काठमाडौंको १० वटा स्थानीय तहका लागि भनेर छुट्टै खोप वितरण गरिने जनाए। तर मन्त्रालयले काठमाडौंको खोप विवरणलाई बागमतीकै सूचीमा समावेश गरेको छ।
उनले केन्द्रमा खोप ‘स्टक’ नभएपनि प्रदेशहरूमा भने खोप ‘स्टक’ रहेको हुनसक्ने बताए। उनले प्रदेशहरूले आफ्नो अनुकूलता हेरेर जिल्लाहरूमा खोप पठाउने हुँदा सबै जिल्लाहरूले एकसाथ खोप लगाउन सुरु गर्न नसकेको जनाए। अहिले पनि देशभर खोप अभियान चलिरहेको भएपनि सबै जिल्लाहरूमा भने सुरु नभएको थापा बताउँछन्।
थप कति खोप आउँदैछ?
झन्डै एक करोड डोज खोप प्राप्त भइसकेको अवस्थामा यसै साता थप ३२ लाख डोज खोप आउने भएको छ। स्वास्थ्य राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठले आइतबार गृह मन्त्रालयमा भएको छलफलमा यहीँ साताभित्र चीन र जापानबाट थप ३२ लाख डोज खोप आउने जानकारी गराएका छन्।
चीन र जापानले नेपाललाई १६–१६ लाख डोज खोप अनुदानमा दिने घोषणा गरेको थियो। चीनले भने यसअघि पनि नेपाललाई १८ लाख डोज खोप अनुदानमा दिइसकेको छ। राज्यमन्त्री श्रेष्ठले फाइजरको ४० लाख डोज खोप खरिद गर्नका लागि आवश्यक प्रवन्धको तयारी पनि भइरहेको जनाए।
यसबाहेक स्वास्थ्य मन्त्रालयले चीनको सिनोफार्म कम्पनीसँग थप ६० लाख खोप खरिद गर्ने सम्झौता अगाडि बढिसकेको जनाएको छ। योसँगै भारतबाट खरिद गरिएकोमध्ये आउन बाँकी १० लाख डोजसहित गरेर आगामी असोज मसान्तभित्र कुल १ करोड ८३ लाख ८२ हजार ८५० डोज खोप प्राप्त हुने मन्त्रालयको अनुमान छ।
नेपालले झन्डै एक करोड डोज खोप प्राप्त गरेपनि ५० लाख डोजबाहेक बाँकी खोप भने विभिन्न देशले अनुदानमा दिएको हो। अर्थात प्राप्त खोपमध्ये झन्डै आधा खोप नेपालले अनुदानमा पाएको हो।
नेपाललाई सुरुमा भारतले १० लाख डोज खोप अनुदानमा दिएको थियो। पछि नेपाली सेनालाई थप एक लाख डोजसहित गरेर भारतले जम्मा ११ लाख डोज खोप अनुदानमा दिएको छ।
सबैभन्दा धेरै खोप अनुदानमा दिनेमा भने चीन छ। चीनले अहिलेसम्म १८ लाख डोज खोप दिइसकेको छ। त्यसबाहेक अनुदानकै थप १६ लाख डोज खोप यसै साता चीनबाट आउने भनिएको छ।
यस्तै अमेरिकाले पनि १५ लाख ३४ हजार ८५० डोज खोप नेपाललाई दिएको छ। जोनसन एन्ड जोनसनको उक्त खोप अहिले विभिन्न ठाउँमा लगाइराखिएको छ। त्यस्तै जापानले पनि नेपाललाई १६ लाख डोज खोप दिने घोषणा गरिसकेको छ। ‘एन्ट्रेजेनेका’ को उक्त खोप यसै साता नेपाल आउने भनिएको छ।
प्रकाशित मिति: आइतबार, साउन १७, २०७८, १८:०५:००